Dubai Kuratidzwa Kwepamberi NeSecha Mabheji
Guta guru uye rine vanhu vakawanda muUnited Emirates, Dubai iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwePersian Gulf. Iyo inozivikanwa seguta rinodhura zvikuru muMiddle East uye nyore nyore rinozivikanwa nemakona aro makuru, Dubai rine nhandare yebhizimisi uye kutashanya.
Nzvimbo dzeSepot Pebbles Tours, sangano reIndia rekuIndia uye rinoshanyira zvakanyanya, rinopa rakasiyana uye rakazara Dubai tour package kune vashanyi vanoda kufarira chiitiko chakanakisisa pavakashanyira muguta rino rinoshamisa. Iyo purogiramu yekufambira inosanganisira:
Kushanyira kweguta rine zvigaro kuBur Dubai Creek, maraki ezvinonhuwira, mahombekombe emahotera, uye white Jumeirah Mosque
Dhow sailboat cruise on the Dubai Creek
Desert safari munzvimbo dziri pedyo nejecha dunes
Kushanya kuBurj Khalifa, chivako chakareba kwazvo pasi rose
Mhenderekedzo yeSepet Pebbles inopawo dzimwe nyika mafirimu ekufambisa kuenda kune imwe nzvimbo inonakidza kuMiddle East. Iyi nzendo dzinoongorora nzvimbo dziri kure, dzinoshanyira nzvimbo dzezvakaitika kare, dzinomisa mufambiro mumunharaunda, uye unoshanyira imwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dzinofadza uye dzinofadza. Sangano rekufambisa-rinotungamirira rinopa international package tours kune zvinotevera:
Bhutan - inogara paSirik Road yekare, Bhutan inopa hunyanya hukuru hwezvinhu kubva munzvimbo dzakasvibirira dzepasi kumakomo kumakomo eAmaalaya pamwe chete nemhuka dzakawanda dzomusango
Maldives - Mauritius - nokuda kwekufamba kwegungwa rine zvinhu zvakasiyana-siyana zvemvura, chikepe, nekuzorora pamhenderekedzo
Nepal - runako hunoshamisa uye gedhi kumakomo akakwirira kupfuura makomo
South South East Asia - tsvaga kunaka kwepanyika uye nhoroondo yeyi nyika yekare
Sri Lanka - iri muIndia Ocean, Sri Lanka yakazara netsika uye yakazara muchitendero cheBuddhist
Kambani inowanikwa uye inyanzvi yekufambisa kweIndia uye yekuMiddle Eastern, kutarisa kweSande Pebbles Tours, yakagonesa vashanyi kuongorora nekuona nzvimbo dzose dzeIndia neMiddle East kwemakore gumi nemashanu. Kutungamira kwaOdisha kutenderera uye Orissa vacation tour mupi anopa zvakawanda zvakasiyana marwendo uye kufamba kumativi ose eIndia uye yekare Orissa.